အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၂၀ နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ စမိုင်းလ် တို့ ဇနီးမောင်နှံ
ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ စတင်ခဲ့ရတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဘဝဖြစ်ပါတယ်။
စမိုင်းလ် တို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၁၅ နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြားက ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူးလို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုပြည့်မောင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
Photo: Pyae Maung
သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ် တို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ အိမ်ထောင်သက်တမ်း နှစ် ၂၀ ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ခန့်က သမီးကြီးကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတဲ့အချိန်မှာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူ စမိုင်းလ် နဲ့ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရတွေကို စမိုင်းလ်ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုပြည့်မောင်က အခုလို ပြောပြထားပါတယ်။
‘’September 17th 2004. ၂ယောက်သားကျောင်းတက်ရင်းဗိုက်ကြီး၊ငယ်လည်း ငယ်သေးတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းလဲမသိ။ မင်္ဂလာသွားဆောင်တော့မိန်းမဗိုက် ၆လ။ အဲဒီ Wedding Dress ကဆိုင်ကနေ £99 နဲ့သွားဝယ်ပြီး ညနေချက်ချင်းပြန်သွားပြီး refund လုပ်ခဲ့တဲ့ dress လေး။ Suit က Bouncer လုပ်တော့ Security company ကပေးတဲ့ uniform. ဖိတ်ထားတဲ့လူ ၅ယောက်ကို ပွဲပြီး Lunch ကြွေးဖို့ပိုက်ဆံမရှိလို့ သူတို့ကပြန်ကေးသွားကြတယ်’’ လို့ အစပျိုးရင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒုက္ခ၊ အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မေတ္တာစစ်၊ မေတ္တာမှန်နဲ့ ဖေးမ ကူညီရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်လို့ ကိုပြည့်မောင်က ပြောပါတယ်။
‘’ဒါပေမဲ့အဲဒီလွန်ခဲ့သော ၁၅နှစ်က တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ကတိပေးခဲ့တယ် For Better or For Worse.. Till Death Do Us Part. ဗိုက်ထဲကသမီးလေး ကိုယ်တွေလိုဘယ်တော့မှမမွဲရဘူး ဆိုုပြီး နှစ်ယောက်စလုံး ရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့တာဒီနေ့ထိပဲ’’ ဆိုပြီးတော့ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီခွဲကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ငွေကြေးဆင်းရဲချိန်အခါက ခက်ခက်ခဲခဲဆောင်ခဲ့ရတဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း အဲဒီအချိန်တုန်းက ဝယ်ဝတ်ခဲ့ရတဲ့ မင်္ဂလာလက်စွပ်လေးကို ဘယ်တော့မှ မချွတ်ဘူးလို့လည်း ကိုပြည့်မောင်က ပြောပါတယ်။
‘’အမှတ်တရကတော့ လက်ထပ်လက်စွတ် £15 တန် ၁ကွင်းပဲဝယ်နိုင်လို့ လက်စွပ်ဝတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဝတ်လိုက်ချွတ်လိုက်နဲ့ ၁ကွင်းထဲကိုလဲလိုက်တယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ပေးတဲ့လူတောင်ရယ်တယ်။အဲဒီ £15 တန်လက်စွပ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ထိဝတ်တုန်းပဲ။ ဘယ်လက်စွပ်နဲ့မှတန်ဖိုးမတူဘူး။ဘယ်အခြေနေဘယ်လိုပဲရောက်ရောက်ဒီပုံထဲကလိုအမြဲမောင့်ဘေးမှာပြုံးနေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ HAPPY ANNIVERSARY CHIT’’ ဆိုပြီးတော့လည်း ဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်စမိုင်းလ် (Smile) ဟာ အခုဆိုရင် စမိုင်းလ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုပါ ဦးဆောင်နေသလို ပရိသတ်နဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့ သရုပ်ဆောင် အလုပ်တွေပါ ပြန်လုပ်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် အလှူအတန်းတွေလည်း မကြာခဏဆိုသလို ဆောင်ရွက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းရယ်၊ သမီးလေး နှစ်ယောက်ရယ် နဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။